Maalinta: Diseembar 4, 2018
3 Disembar Maalinta Caalamiga ah ee Naafada Dadka Naafada ah waxay la kulantay wakiilo, xubnaha iyo qoysaska ururada naafada ah ee Konya, Uğur İbrahim Altay, Duqa Magaalada Konya [More ...]
Kayarification-dogançay Nidaamyada Nidaamka Korantada Korantada 1 Dayactirka iyo Dayactirka Tijaabada Tixraaca Shaqada Kayas-dogancay inta u dhaxaysa 2018 / 540412 GCC iyada oo qiimaha ugu sareeya ee loo yaqaan '14.014.809,84 TL' ee Maamulka Gobolka Tareenka Waddooyinka ee Turkiga (TCDD). [More ...]
Loogu talagalay carruurta dugsiga barbaarinta, ardayda dugsiga hoose iyo sare ee Kayseri bartamaha iyo degmooyinka ku xiran, Kayseri Ulasim A.Ş. 'Adeegsiga Gaadiidka Dadweynaha iyo Wacyigelinta Kor u Qaadka' ayaa la bixiyay. Tababbarka joogtada ah tan iyo 2010 [More ...]
Haddii waddada loo maro meel hoos mara
Dogan Yilmazkaya, oo ah gudoomiye ku xigeenka kooxda CHP ee Golaha Magaalada Caasimadda, kuna doodaya in wadooyinka cusub ee isku xira caasimada aysan yareyn doonin taraafikada, ayaa yiri: “Waxaan ubaahanahay inaan yeelano shabakad nidaamka tareenka ee weyn Ankara si aan uga niyad jabno dadka baabuurta. Waddo xagga sare ah [More ...]
Ardayda Jaamacadda Mediterranean-ka ee Baadhitaanka Mashruuca Nidaamka Isgaadhsiinta
3 Antalya Dawlada Hoose ee Magaalo Weyn waxay kusii socotaa xawaaraha rikoorka. Mashruuca Nidaamka Tareenka Marxaladdu wuxuu ahaa mowduuca dib-u-eegista lagu sameeyo waaxda injineeriyadda bulshada ee Akdeniz Murashaxiinta Injineerka, daraasado farsamo oo goobta ah booqashada mashruuca. [More ...]
Istanbul Street oo la furay gaadiidka baabuurta ee Düzce
Ku dhawaad ​​1.5 sano ka hor 'Mashruuca Dhisida Wadada' Istanbul Street ayaa loo xiray marinka gawaarida saaka, taraafikada ayaa mar labaad la furay in la xiro saaka. Dursun Ay, Duqa Magaalada Düzce, oo aan ka helnay warbixin taleefan ahaan, [More ...]
'Gawaarida' ee Gaadiidka laga bilaabo Maanta ilaa maanta
Buugga Behice Tezçakar Özdemir 'Taariikhda Boqortooyada laga soo bilaabo Jamhuuriyadda illaa Siemens' ee buugga laga soo bilaabo kuwii la soo dhaafay iyo horumarka xilligan ee tareenka ayaa la baarey. Markii aan kahadalno jidadka tareenka, inteena badankeena waxaan ka fikirnaa macangag murugo leh ama muuqaallo farxad leh oo kujira filimada. [More ...]
RayHaber 04.12.2018 Warbixinta Shirka
Adeegga Hantidhawrka ee Madaxa Bannaan ayaa la Qaadi Doonaa Shaqaalaha Shaqaalaha Waxaa Lagu Soo Iibsan Doonaa Shidaal Waxaa Lagu Iibsan Doonaa (TÜDEMSAŞ) Mashiinka Barta Mashiinka Waxaa Lagu Iibsan Doonaa Adeegga Xarunta Kuleylka Howlaha Howlgalka Waxaa Lagu Qaadi Doonaa Biraha Saldhigga ee Mashruuca Tareenka Qaranka (TÜVASAŞ) Aluminothermite [More ...]
18 Metro Line iyo Saldhigga 192 ee Istanbul
Xero cusub oo 18 iyo saldhigga 192 ayaa laga furi doonaa Istanbul. Laga soo bilaabo Tuzla ilaa Silivri, Istanbul waxaa la dhisi doonaa tuubooyin birta ah marka shaqooyinka ka jira gees kasta oo Istanbul ah la dhameeyo! [More ...]
IZTO ayaa ka wada hadashay Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta OSB Logistics
Rugta Ganacsiga ee İZMIR (İZTO) waxay la kulantay Wasiirka Warshadaha iyo Teknolojiyadda Mustafa Varank sidii loo dhisi lahaa Mashruuca Village-ga ee loojistikada, kaas oo la qorsheynayo in laga dhiso Kemalpaşa, oo leh heerka Aasaasiga Aasaasiga Aasaasiga Aag Wershadeed ”. Guddoomiyaha IZTO [More ...]
Dawlada Hoose ee Ergene 3 ayaa qaban qaabisay xaflad aroos oo ka dhacday Pınarbaşı si loogu xuso Maalinta Naafada Aduunka. Boqolaal muwaaddiniin ah ayaa ka soo qeybgalay munaasabadda. 3 Diseembar Maalinta Caalamiga ah ee Naafada Dadka ayaa si xamaasad leh loogu dabaaldegay Ergene. Xaafadda Pinarbasi [More ...]
Maareeyaha Guud ee TCDD İsa ApaydınBishii Disembar, joornaalka Raillife ayaa daabacay maqaal cinwaan looga dhigay "Dhameystirka Rings of Iron Silk Road". Waa tan TCDD GENERAL MANAGER APAYDIN’s LETTER Qiimaha dhismaha waa raqiis yahay, cimri dheer adeeg, [More ...]
Waxaan aad ula xiriiraan Turkey Giant Highway
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan in tirada joornaalada December Raillif "Waxaan aad ula xiriiraan Turkey Giant Highway" waxaa la daabacay maqaal cinwaankiisu yahay. Waraaqda TURHAN OO KA SOO SAARAY WASIIRADA GAADIIDKA IYO KHUDBADAHA KHUDBADAHA [More ...]